बिहीबार संविधानसभामा के बोले भट्टराईले ! (पूर्णपाठ)
संविधानसभाको बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा डा. बाबुराम भट्टराईले राखेको विचारको पूर्णअंश:
हामी हाम्रो पुस्ताले इतिहास निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं । ६५ वर्षदेखि नेपाली जनताको आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफ्नै चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत अर्थात संविधानसभामार्फत निर्माण गर्ने जुन अभियान थियो त्यसलाई विभिन्न कालखण्डमा हामीले पूरा गर्न सकेका थिएनौं । तर अहिले हामी अब अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौं । यो परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलबाट यसलाई जब हामीले केही दिनमा, केही हप्तामा पारित गर्नेछौं त्यो हाम्रो सपना, हाम्रो अभिभारा पूरा हुनेछ । हाम्रो पुस्ताले युगौंयुगसम्म गर्व गर्न लायक काम सम्पन्न गर्नेछ । मैले पहिले पनि एकपटक भनेको थिएँ – हामी सगरमाथाको चुचुरोको नजिक पुग्दैछौं । तर हामी पटक–पटक त्यहाँबाट लड्यौं । विभिन्न कालखण्डमा दुर्घटनाहरु भए । तर आज मलाई भन्न मन लागेको छ – हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ पोल’मा पुगेकै छौं र यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । अब हामीले चढ्न सकेनौं, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को संविधानसभा हुनेछैन, इतिहासले अर्कै मोड लिनेछ । त्यसैले यसपटक हामीलाई असफल हुने छुट छैन । हामी सफल हुनैपर्छ । त्यसैले यो ‘साउथ पोल’मा हामीले गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित भएर यसपटक सफल हुने अठोट गरौं । यही भनाइका साथ म आफ्नो केही कुराहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
संविधान बनाउने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनहरु भएका छन्, हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । आफ्ना अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनता सजग हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । कुनै कालखण्डमा हामी सबै, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी सबै आन्दोलनकारी शक्ति हौं । त्यसैले जनताले आन्दोलन गरे भनेर उनीहरुप्रति असहिष्णु हुनु आवश्यक छैन । हामीले पनि आन्दोलनमा ठूल्ठूला काम गरेका छौं, ‘प्लेन’ हाइज्याक गर्नेसम्मका काम हामीले हिजो गरेकै हो । त्यसैले हामीले अहिले आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुलाई दुत्कार्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई वार्तामा ल्याएर समाधान खोज्नेतिर जानुपर्छ । तबमात्रै शान्ति आउँछ । आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो – शान्ति भनेको बलबाट होइन समझदारीबाट कायम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी मार्टिन लुथर किङले भन्नुभएको थियो – वास्तविक शान्ति भनेको खालि तनावको अभाव मात्रै होइन वास्तविक सत्य र न्यायको स्थायी स्थापना पनि हो । त्यसैले सत्य र न्याय स्थापना गरेर सही शान्ति स्थापना गरौं । त्यसैको निम्ति आग्रह गर्दै पछिल्ला दिनमा टिकापुर लगायतका ठाउँमा जुन खालका अत्यन्त दु:खद् घटना हुन पुगेका छन् त्यसप्रति म दु:ख प्रकट गर्दै मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सबैले सहमतिले, संवादले निकास खोजौं र छिटो संविधान बनाउँ । छिटो संविधान बनाउनबाट अब हामी चुक्नु हुँदैन । सगरमाथाको चुचुरो नजिकै ‘साउथ पोल’मा हामी आइपुगेका छौं । यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । तपाईं–हामीलाई असफल हुने छुट छैन । यही प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु ।